मेरो दाह्री दुनियाँलाई किन भारी ? गालामा दाह्री काँधमा जिम्मेवारी ! – Everest Dainik – News from Nepal
मेरो दाह्री दुनियाँलाई किन भारी ? गालामा दाह्री काँधमा जिम्मेवारी !
काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा दाह्रीका सोखिन तन्नेरीहरूको संख्या सहरमा बाक्लै देखिन थालेको छ । तर यिनीहरूले ऋषिमुनिजस्तै देखिन दाह्री पालेका होइनन् ।
उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दाह्री ग्याङ नामक फेसबुक पेज नै चलाएका छन् । आफ्नै म्यासेन्जर ग्रुपसमेत छ उनीहरूको । जहाँ उनीहरू आ–आफ्ना अनुभूति मात्रै साट्दैनन्, दाह्रीका अनेकन रहस्य र किस्सा पनि बाँड्छन् ।
उनीहरूको साझा उद्देश्य दाह्रीमा मात्रै अल्झेको छैन । यो ग्याङका साथीहरू परोपकारी र सामाजिक काममा पनि उत्तिकै संग्लन छन् । उनीहरू चाहन्छन, दाह्री पाल्नेहरू पनि जिम्मेवार मान्छेहरू हुन् भनेर सबैले जानुन् ।
केही वर्षपहिले सुरु भएको दाह्री ग्याङमा अहिले देशभरका डेढ लाख जति सदस्य छन् । काठमाडौंबाट सुरु भएको यो ग्याङ अहिले पोखरा, चितवन, बुटवल, धनगढी, हेटौंडा, विराटनगर, झापा, इलाम र इटहरीसम्म फैलिएको छ ।
जिल्लाहरूमा एरिया संयोजकहरू छन् र तिनीहरूले समन्वय गरेर ग्याङका सदस्यहरूबीच हरेक महिना भेटघाट गर्दछन् । जहाँ उनीहरू कसरी अघि बढ्ने रु के कस्ता सामाजिक काम गर्न सकिन्छ भन्नेजस्ता विषयमा छलफल गर्छन् । कामको बाँडफाँड गर्छन् ।
दाह्री ग्याङमा सामेल हुन कुनै योग्यता चाहिँदैन । चाहिन्छ त खालि मन र दाह्री पाल्ने सोख । यति चीज छ भने यो ग्रुपमा गएर सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । ग्याङका सदस्य जगदीश भण्डारी उत्तर दिएपछि यो ग्रुपमा सामेल हुन सकिने बताउँछन् ।
दाह्री ग्याङका अर्का सदस्य अभिषेक राजसिंह थापा दाह्री पाल्नेहरूलाई समाजले हेर्ने नकारात्मक सोचाइ परिवर्तन गर्न आफूहरू लागिपरेका बताउँछन् ।
दाह्री ग्याङमा सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरू जोडिएका छन् । उनीहरू एकआपसमा भेट्दा जय दाह्री भनेर सम्बोधन गर्छन् । विभिन्न रमाइलो, रोचक र घोचक भनाइ समेटिइएका टिसर्ट पनि ग्याङका साथीहरूले छापेका छन् ।
‘मेरो दाह्री दुनियाँलाई किन भारी ?’ ‘गालामा दाह्री काँधमा जिम्मेवारी’ जस्ता नारा लेखेका टिसर्ट लगाएको कोही भेट्नुभयो भने ठान्नुभए हुन्छ, ती टिर्सटको सुरुआती डिजाइन यही ग्याङले गरेको हो ।
दाह्रीलाई समाजमा स्थापित गराउन लागेका तन्नेरीहरूको आफ्नै पीरमर्का छ । प्रायः दाह्री पाल्ने युवाहरूलाई ‘विवाह गर्दा त दाह्री काटेर जाने होला नि ?’ भनेर खिसी गर्दै प्रश्न सोध्छन् चिने–जानेकाहरू । अनि उनीहरू पनि रमाइलो पाराले जवाफ दिन्छन्, ‘बरु विवाह गरिंदैन तर दाह्री काटिन्न ।’
दाह्रीका अनेकन प्रकार छन् । जस्तै, नेचुरल फुल बिअर्ड, फुल बिअर्ड, एड्मिन स्टाइल, भर्डी, स्विटलेडी र फ्रेन्च फर्क । दाह्री ग्याङ कुनै बैठक बसेर, लामो छलफल गरेर र विधिविधान बनाएर जन्मेको होइन । यो कसरी जन्म्यो भन्ने रोचक कथा छ ।
दाह्री ग्याङका अभिषेकराजसिंह थापाले सुनाए, ‘पढाइको सिलसिलामा एक दिन सत्यमोहन जोशीलाई भेट्न गएका थियौं ।’ उनले त्यो समय सम्झिदैं भने, ‘सबै दाह्री पालेका हामीलाई देख्नेबित्तिकै उहाँले भन्नुभयो, ओहो तपाईंहरू त दाह्री ग्याङ नै भएर आउनुभएछ ।’ जोशीको यही भनाइ सुन्नेबित्तिकै आफूहरूले दाह्री ग्याङको परिकल्पना गरेको थापाले सुनाए । कान्तिपुरबाट साभार
ट्याग्स: Dari, Dari Gang